NAB Gosi Akụkọ site na Mgbasa Mgbasaozi. Mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB Gosi LIVE - Page 853 - NAB Gosi News: Ụlọ ọrụ Ịgba Ọkụ, TV na Radio Technology na Post Production News. Na-emepụta NAB Gosi LIVE
Egwuregwu Egwuregwu - Onye Ntanye Aka
N'okpuru onye nlekọta na-emepụta ihe, ọnọdụ a ga-etinye aka na akụkụ nile nke mmemme / ihe ngosi LIVE. Ọrụ gụnyere ịde ederede & ntinye ederede, teases, features, and initiatives related to team; ihe nchịkọta ihe; na-eme mkpọtụ / usoro dijitalụ na ihe ndekọ maka nchekwa. Ọrụ -Ide ederede, idezi isi ihe, ngwà, atụmatụ na ikpokọta ihe ngosi. -Gụkọọ na ndị na-emepụta ihe na ntanetị na idezi ụlọ iji kpọkọta ihe na ịhazi ihe. Ndị na-ede akwụkwọ na nhazi nke mmepụta atụmatụ na ihe. Nchịkọta na ihe nchịkọta, vidio, ajụjụ ọnụ, na isi ihe. Nweta ma nyere aka na nchekwa mgbasa ozi. -Nwepụta mkpụrụ maka oru ngo pụrụ iche. -Akwado nzuko na nzuko ogbako ndi metutara ...
Onye nlekota oru ahia - Mgbasa ozi
Ọrụ: - Onye nchịkwa na-azụ ahịa ga-ahazi mmegbu niile nke Netoon Networks stunts / marathons, na nkwalite ndị ahịa ahaziri. Nke a gụnyere ịrụ ọrụ ozugbo na ahịa netwọk na ndị ahịa iji nweta ihe niile e kere eke, usoro azụmahịa nke azụmahịa na kọntaktị netwọk, ịchekwa ngwongwo na atụmatụ Strategic, mmepụta mmepụta mmemme na netwọk ma hụ na a kwadoro nkwado ọ bụla n'ụzọ kwesịrị ekwesị. - Nọgide na-edebe, melite ma nyefee Netwọk Netwọk ọnọdụ na ihe ndị dị na G: ụgbọala ka ike ahịa na ahịa netwọk. Ihe ndị a nwere ihe ọmụma niile dị mkpa maka ihe ọ bụla Cartoon Network Promotion nke a na-ere ma dị. - ...
Artforum na-achọ onye mmepụta mmepụta. A chọrọ nlekọta mgbasa ozi. Ikike Adobe CS dị mkpa. Ọrụ a gụnyere akụkụ niile nke mbipụta na-ebipụta magazin, dijitalụ, na nlekọta weebụ.
Ụlọ ọrụ Production Office
Ụlọ ọrụ Production Office / Onye nchịkwa ga-enwe ohere ịmụta ọtụtụ nkà nlekọta na mmepụta ọrụ, ga-eji ọtụtụ ọkwá na-akwado ndị ọrụ mmepụta na ndokwa njem, iwu ịzụta, ụtụ ego na obere ego; ga-akwado onye na-emepụta ihe site na akụkọ na archival research, na ga-abanye na ịdebanye aha ahịa. Ndị ga-aga nke ọma ga-enweta ọzụzụ ma ọ bụ ọzụzụ na mmepụta ma ọ bụ post-mmepụta yana mmasị siri ike na ihe nkiri ntinye, nchọpụta na ihe ndị dị ugbu a. E kwesịrị ịhazi ndị na-eme nchọpụta, ndị ọkachamara, ndị ịnụ ọkụ n'obi, na imeghe ihe mmụta. A choro ihe omuma nke Office Microsoft tinyere isi nke Excel. Nweta ihe ndi ozo ...
Ụlọ ọrụ Production-Ụlọ Nzukọ Ụlọ Ọrụ
Shenandoah Conservatory nke University of Shenandoah na-achọ onye na-emepụta ihe nwere ahụmahụ maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya iji malite ozugbo. Ọrụ ndị isi na oge a, ọkwá bara uru gụnyere ma ọ bụghị nanị njikwa ọrụ ụbọchị nke Armstrong Concert Hall na Goodson Recital Hall / Chapel maka iji Conservatory mee ihe, ịnọgide na-enwe usoro ọrụ dị mma iji mee ihe iji mezuo ihe ọmụmụ University na Conservatory arụ ọrụ egwu egwu na ịhazi ihe niile dị na ụlọ ọrụ ndị ahụ na ụlọ akwụkwọ campus na ụlọ ndị omempụ; na-arụ ọrụ na oche oche, ndị isi nchịkọta, na onye isi nchịkwa na ịnọgide na-enwe nlekọta nnabata nwere ike ịnweta ma na-edozi esemokwu n'usoro oge dị mkpa; nchịkọta ma hụ na ...
Onye na-emepụta ihe ntanetị
Ịmata ụdị ụdị egwu ọ bụla ọzọ, hip-hop (ụlọ akwụkwọ ochie na ọhụrụ), r & b na pop. KWESỊRỊ MUSIC JUNKIE. Ọ maara nke ọma na omenala pop, karịsịa ndị na-egwu egwu, ndị na-eto eto, ndị na-eme ihe nkiri na TV maka afọ 10 ikpeazụ. Mara na ndị na-egwu egwu na ndị na-emepụta ihe dị iche iche nke ọtụtụ ụdị egwu. Saavy Internet - ndị na-enyocha kwesịrị ịma ụzọ ha na Facebook, blọọgụ egwu, saịtị akụkọ egwu, Twitter, Instagram, saịtị YouTube ma gosipụta nkwụsi ike na nnyocha ntanetị. Haziri ma nwee ike idebe nkedo na-eduga, nọgide na-etinye faịlụ, nhazi oge nhazi na nyocha ntinye ntaneti. N'ikpeazụ, ikike nhazi (otu onye) - ...
Onye na-enye aka na-enye aka maka okike na nzi ezi nke ihe oyiyi na ihe vidio maka iji na ikuku. Ga-enyere ndị na-emepụta ihe n'ịchọta vidiyo, ịchọta data nchịkọta akụkọ na ihe ndị e wuru maka ụlọ ọrụ abụọ na mmepụta ihe dịpụrụ adịpụ. Ogo mmụta ogo chọrọ. Kwesiri igosi ihe omuma ihe omimi n'egwuregwu college na pro basketball na Major League Baseball. Kwesịrị inwe nkà nkwurịta okwu siri ike, ma e dere ma ọnụ.
A USC gụsịrị akwụkwọ akụkọ (egwu / nkwụsị), ịbụ onyeisi nke onye na-eme ihe nkiri TV Network, na-achọ UPM. Nhazi usoro: n'etiti rue mbubreyo nke January na LA Mgbatị: Jan 17-21; Jan 25-26Please tinye aka ma ọ bụrụ na ị bụ onye okike ma kee onwe ya nke nwere ike ịrụ ọrụ n'oge. Enwere mmasị na ụdị ihe nkiri egwu ahụ bụ nke ọzọ, ma ọ bụghị ihe ịga nke ọma .Ọ bụ ezie na nke a bụ ọnọdụ a na-akwụghị ụgwọ, ọ bụ ohere dị ukwuu ịchọta ọrụ gị site na ọtụtụ ụdị ihe nkiri, ka anyị na-ezube igosi vidio a n'ọtụtụ ememme ụwa nile! nri nri.Please send letter letter na ...
A USC gụsịrị akwụkwọ akụkọ (egwu / nkwụsị), ịbụ onyeisi nke otu onye na-eme ihe nkiri TV, na-achọ onye mmepụta ihe na-emepụta ihe. Nhazi usoro: n'etiti rue mbubreyo nke January na LA Mgbatị: Jan 17-21; Jan 25-26Please tinye ma ọ bụrụ na ị bụ onye okike, onye nwere ahụmahụ, na onye ọkachamara nke pụrụ ịrụ ọrụ n'oge. Enwere mmasị na ụdị ihe nkiri egwu ahụ bụ nke ọzọ, ma ọ bụghị ihe ịga nke ọma .Ọ bụ ezie na nke a bụ ọnọdụ a na-akwụghị ụgwọ, ọ bụ ohere dị ukwuu ịchọta ọrụ gị site na ọtụtụ ụdị ihe nkiri, ka anyị na-ezube igosi vidio a n'ọtụtụ ememme ụwa nile! nri provided.Please ...
Ebe a na-eme egwuregwu DORT D na Sarasota, FL na-achọ Production Production na-elekọta ihe ngosi na ihe osise. Ọrụ gụnyere: nlekọta na mkpochapụ nke props, nlekọta na mkpocha ihe osise, na nkwado nchịkwa maka Manager Production. Ọ dịkarịa ala afọ atọ nke ahụmahụ ọkachamara ihe nkiri chọrọ.
Digital Production nnyemaaka
Ọrụ: Gbanwee saịtị Wepụta ebe nrụọrụ weebụ, ngwa, okporo ụzọ, na nchịkọta nhọrọDownload / Ebuli / megharịa niile vidio na foto maka ntanetị webCreate na hazie ihe ngosi maka ihe ngosi òkù visualsKeep media media, Artnet, na Wikipedia saịtị emelitereIbuzi ihe emelitere na ebe nrụọrụ weebụ ibe weebụ Digital File Archive ManagementCoordinate digital njikwa faịlụ na Production ManagerRecord oyiyi mmelite na nchekwa data ma dozie faịlụ dijitalụ maka ngwa nchịkọta Nọgidenụ na-edepụta akwụkwọ, kalenda mara mma, listi ekwentị na kọntaktị kọntaktịAkwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị gụnyere nsụgharị nke mbubata akwụkwọ na ọkwa ọrụ ọhụụ maka ahịa na ihe ngosi
Usoro Mmemme Ọdịnaya ahụ bụ usoro mmemme iji chọpụta na ịzụlite ọgbọ na-esote ndị isi na ESPN. Ọ bụ usoro ntinye anyị na-eme ka anyị nwee ike ịmalite ịmalite ịmalite imepụta ihe na ihe ọmụma ma nye ha ntọala iji nwee ọganihu n'ime nzukọ. Ebumnuche nke a iji nye usoro ọrụ doro anya, kọwaa atụmanya ọrụ na nhazi mmụta na ohere mmepe maka ndị ndú nke ESPN n'ọdịnihu. ESPN, Inc., Onye Ndú na Ngwá Agha Ụwa, bụ ndị isi na-ahụ maka otu ntụrụndụ ntụrụndụ multimedia, bụ nke gosipụtara ọnụ ọgụgụ kasị elu nke akụ akụ multimedia na ndị 50 azụmahịa azụmahịa. Onye isi na Bristol, Connecticut, ESPN bụ ...
Okpokoro Mmiri - Production / Ịrụ ọrụ
Na mgbakwunye na ọrụ ndị nlekọta na-emebu, mmepụta na-arụpụta ọrụ ga-ebu ọrụ maka nyochagharị edepụtara ederede na mkpuchi, na-enyere ndị na-arụ ọrụ mmezi aka na nhazi nke usoro nhazi na ọdụ data, na ịkwadebe faịlụ maka mbipụta. Ụlọ akwụkwọ ga-enyekwara ndị nhazi ọrụ na nchịkwa nchịkwa aka site na ịzụ ahịa ihe n'ụlọ (ya bụ, izipu mgbasa ozi na foto ndị na-ede akwụkwọ na mkpuchi maka mbipụta akụkọ na ịbanye copedits na ihe odide maka nchịkọta akụkọ). Dabere na ahụmịhe ọkpụkpụ na Adobe Creative Suite, onye nwe ụlọ nwekwara ike ịbụ ọrụ maka ịmepụta ihe maka mgbasa ozi, ọkọlọtọ maka ebe nrụọrụ weebụ Asaa, ederede ederede, na ntụgharị akwụkwọ e-akwụkwọ. Ngwa: Ọrụ siri ike, ụzọ, ...
Na-achọ onye na-enwu gbaa, nke a haziri ahazi nke nwere mmasị na ya ma nwee ahụmahụ na akwụkwọ edemede omenala. Ọrụ ndị ga - agụnye: - ịmepụta usoro ntinye aka - ebipụta atụmatụ - ịzụta ihe site na ndị na - azụ - nyochaa ime na mkpuchi / jaket ngwaọrụ - ịkwadebe akwụkwọ nhazi na ịzụta ihe maka onye nbipute - nyochaa ihe ngosi agba si n'aka ndị na - ere - nyochaa akwụkwọ blues / nyochaa ìhè nke ìhè: Ọ ghaghị ịbụ na 1 1 / 2 YEAR BOOK PRODUCTION EXPERENCE.
Onye na-ede akụkọ akụkọ / mgbasa ozi
The Associated Press na-achọ onye na-ede akụkọ ihe ọmụma / mgbasa ozi maka mpaghara ederede West Regional na Phoenix, Arizona. Otu onye edemede na mgbasa ozi na desktọọpụ mpaghara mpaghara United States na-ede, faịlụ na enyere aka ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi na mpaghara mpaghara dị iche iche. Ndị edemede bụ akụkụ nke ọrụ 24 / 7 siri ike, nke na-agụnye editọ si ederede, foto, multimedia na vidiyo. Ndị ọrụ na - arụ ọrụ dị ka otu iji hụ na AP nwere ihe gbasara akụkọ ụbọchị niile n'ụdị niile. Onye edemede a na-agbasa ozi ọma na-akọrọ Editorial Broadcast Editor, na-arụkọ ọrụ nke ọma na ndị editọ akụkọ na ndị nta akụkọ na mpaghara yana mgbasa ozi nke mba ...
News Production nnyemaaka
ACHỤKWU NDỊ NA-ECHICHE & AJỤJỤ gụnyere ndị na-esonụ: - Dub dara maka ikuku. - Debe ma nyochaa ndụ gbaa. - Were onye nta akụkọ na-azụ maka ikuku. - Zaa telefon ma jikwa ajụjụ ndị na-ege ntị. - Na-eduzi nlele ego ma na-agbaso ndụmọdụ gbasara ozi. - Nye ndi mmadu ozi oma aka n'ozuzu ha, karia mgbe ha na agbasa ozi. Ndị Nlereanya A Chọrọ Ga-enwe ike ịhazi, dozie nrụpụta oge, dee 45 + okwu na nkeji. Ga-enyocha kọmputa. Kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ ọ bụla awa, nchịkọta, na ngwụsị izu ma bụrụ ndị nwere ike ịgbanwe na ngbanwe ọrụ. Ihe ngosi ndi a choro nke oma Redio na / ma obu akuko ...
Sports Account Executive (Spanish na agbasa ozi n'ikuku)
The kpara WFAN AM / FM na ọhụrụ radio n'ụlọ nke NewYork Yankees, na-achọ ka Sports Account Executives na-anọchite anya andsell na Spanish Language na agbasa ozi n'ikuku maka NEW YORK Yankees Radio Network. Nke a na ọnọdụ na-achọ a dị ike ọrụ, onwe amalite, andaggressive sales gbakwasara mmadu. Ị ga-aghọta na-respectbrands na otú ha nwere ike ike. Ịbata kwesịrị experienceat ala otu ma ọ bụ karịa nke ndị na-esonụ: Sports nkwado Sales, Sportsor Hispanic Radio, New Business Development, Ntụpụta elo ere, na / ma ọ bụ Strategic / dọba ere Nkà. Isi ihe na-a ọnọdụ ga-enwe atụmanya na developrelationships na isi Obodo na Regional mkpebi ...
Boutique Management / Production Company na-achọ nnyemaaka nchoputa na-amalite January 2014. Aga ime ga-oké gbara akpụkpọ, doro nsọ. Ọrụ mbio inyefe oku na n'ịhazikọta ka ịgụ ihe na-enye ndetu ahịa oru ngo. Kwesịrị na-achọ onye na otu afọ oche ahụmahụ na mmasị na-amị na management. Ga-ala gburugburu nkịta.
Page 853 nke 856«mbụ...830840850"851852853854855»...ikpeazụ »
Nkeji edemede Archives Họrọ net November 2018 (223) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (398) July 2018 (876) June 2018 (869) Ka 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) Ka 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) Ka 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) Ka 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) Ka 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) Ka 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, Achọtara m ozi a maka gị: "Ọkachamara Ọganihu Ngwaahịa". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/product-development-engineer-5/. Daalụ.